Tsika dzechiPutukezi | Absolut Kufamba
Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweEurope, Portugal inopinda muSpain nematanho ayo ekumabvazuva nekuchamhembe, uye inotarisa kuyambuka Atlantic kuenda kumadokero nekumaodzanyemba. Uine hupfumi hwetsika tsikaUye nzvimbo inosanganisira makomo akasvibira, mapani akanyoroveswa nezuva, uye mamaira nemakiromita emahombekombe anoshamisa, Portugal inopa kugamuchirwa kune vashanyi vanobva kutenderera pasirese
Portugal inovhara 92,212 km² uye ndiyo nyika yekumadokero zvakanyanya mu Continental Europe. Nyika yakakamurwa kuva matunhu akati wandei, rimwe nerimwe riine nzvimbo yaro yakasarudzika uye hunhu. Ku kuchamhembe, iyo Miño yakasvibirira, iri huwandu hwakasimukira, nepo muvakidzani we Pashure-os-Montes yakawanda kwazvo uye kashoma kushanyirwa nevashanyi.
1 Tsika nemagariro echiPutukezi
2 Mashandiro Emagariro Evanhu Anoshanda Sei
3 Misangano yebhizinesi uye manejimendi kuraira
Tsika nemagariro echiPutukezi
VaPutukezi vanowanzo nyoro, vane mutsa uye vane mwero. Vashanyi vanoita kuyedza kudzidza kunyangwe mashoma mazwi akapusa kana zvirevo senge Mhoro (Bom dia of), Ndatenda (kubvumirwauye musara zvakanaka (tchau) ichaongwa.
Mhuri yakakosha munzira yechiPutukezi yehupenyu, uye inotungamira pamberi pehumwe hukama, kusanganisira bhizinesi. Kushandisa nhengo dzemhuri mukati mebhizinesi kunoonekwa sechinhu chakajairwa kuita muPortugal, sezvo zvine musoro kuti vatenderedza nevanhu vaunoziva.
VaPutukezi vane chekuitawo nazvo kuoneka uye kuremekedza. Kupfeka zvakanaka, chero chiitiko, kunoonekwa sechiratidzo chekuremekedza, kunyanya pakati pezera revakuru. Zvichienderana nehukama hwako ne munhu akafa, kuchema kunogona kutora makore akati wandei, uye dzimwe shirikadzi dziri kumaruwa dzinochema kweupenyu hwadzo hwese.
Portugal inyika ine akawanda mhenderekedzo mapoinzi, saka yayo tsika yekudya sardines, mackerel uye inozivikanwa cod they (yakaoma, ine munyu kodhi) zvakavimbika pamamenyu emarudzi ese eresitorendi: nyama yenguruve ndiro zvakajairika, senge zvinonaka nyama yenguruve uye chorizo ​​sausage uye mbesa dzakabikwa. VaPutukezi vanonamata avo zviwitsi nemakeke, uye kushanya kuchitoro chemabheka kuchaburitsa mhando dzese dzezvinonaka.
Portugal ine mhemberero dzakawanda dzekucherechedza akasiyana mazuva matsvene, pamwe neanoverengeka akakosha emazororo egore, kusanganisira Portugal Zuva (Chikumi 1), Kubata kweMhandara (Nyamavhuvhu 15) uye iyo Republic zuva (Gumiguru 5). Pamusoro pezvo, mataundi nemaguta kutenderera nyika kazhinji vane mutambo wezhizha, kazhinji unosanganisira kurwa nenzombe kana kurwisana kwenzombe kuburikidza neguta.
Mashandiro Emagariro Evanhu Anoshanda Sei
Sezvo Portugal iri nyika pane inochengetedza uye yakachengetedzwa, hunhu hunofadza kubva kuvashanyi hunogona kuonekwa sehunhu. Iyo kukwazisa kunofanirwa kuve kwakarongeka uye kunoremekedza, nemazita ekuremekedza, akadai se Mr. naMai iwo anofanira kugara achishandiswa, kunze kwekunge iwe wakadanwa chaizvo kuti ushandise mazita. Itsika yavo kukwazisana vanhu vasingazive zvakanaka, uye neshamwari dzepedyo, zvakajairika varume vanombundira uye vakadzi vanosveta rimwe dama, kubva kurudyi kuenda kuruboshwe.
Kunonoka kumusangano kunoonekwa sekusvora, saka nguva dzose edza kubata nguvaZvimwe zvekugadzwa kwebhizinesi kana kana iwe uchikokwa kuresitorendi kana kudya kwemanheru kumba kweshamwari kana munhu waunoziva. Kana iwe ukakokwa kuzodya kumba kwemumwe munhu, itsika kuunza chipo chidiki asi chinofungidzirwa, senge machokoreti kana maruva.
Munyika zhinji, ndiro yakachena pakupera kwekudya chiratidzo chekuti unakirwa nekudya, asi muPortugal, inoonekwa seyakanaka siya chikafu mundiro kana wapedza.
Semutemo wenguva dzose, maPutukezi havaendi kunotandara mushure mekushanda mukati mevhiki, uye vanozvivaraidza chete mukupera kwesvondo
Misangano yebhizinesi uye manejimendi kuraira
Kunyange Chiputukezi ichigona kunonoka kumisangano, zvaizotorwa sehunhu. Kana iwe ukachengetwa wakamirira musangano webhizinesi, zvakakosha kuti usagumbuke.
Chero musangano webhizinesi unogona kuve neakanaka degree rekutaurirana izvo hazvina hukama nemusangano. Iyi inzira yekuti vamwe vako vechiPutukezi vazive iwe, uye haufanire kuedza kumhanyisa musangano kana kugumbuka nekuti chirongwa chako chakanyatsorongwa chiri kufuratirwa. Kana iwe uchitarisira sarudzo dzebhizinesi dzakaitwa mukati memusangano dzinoteedzerwa, ungangodaro unoodzwa moyo, sezvo sarudzo dzinowanzoitwa kunze kwemisangano yakarongeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika dzechiPutukezi
Nzvimbo dzekutenga hadzivhurike kubva 10:00 kusvika 23:00. Ivo vanovhura kubva ku9: 00 kusvika 24: 00.
zvakanaka kwazvo chaizvo ndinovatuma kuti vaone kuti vakanaka chaizvo
lau -peru akadaro
Zvakanaka ruzivo urwu rwakandibatsira mune chimwe chinhu, ini ndinodzidza gastronomy uye ini ndiri mukutsvaga kwakazara pane ese echiPutukezi gastronomy tsika dhizeti chikafu .... Kunyangwe panofanirwa kuve nepeji pandingawana zvese zvingandibatsire zvakanyanya pakuratidzira kwangu ... uye kana paine iro peji ritumire x peji rino px ....
Pindura kuna lau -peru
Mhoroi, ini ndiri yessica uye ndinofunga kuti nyika yechiPutukezi yakanaka kwazvo uye ndinoda kutaura kuti ndiri kutsvaga mukomana uye ndinowanikwa
kumusoro kwePortugal neMexico vanakomana vemabhureki vanoti inodadisa yeMexico
Ana San Roman akadaro
Pindura Ana San Román
Mhoro, Izvo hazvindishandire hehe = (
Ndeipi bummer yandisingakwanise kuwana tsika dzaPottugesa
Pindura ku luisana
Nyika yakanaka kwazvo, ndakave nerombo rakanaka kuti ndishanyire makore mashoma apfuura uye ichokwadi kuti vanhu vane rudo uye vanodziya, ndaivewo nezvikonzero zvebasa neboka revaPutukezi muAsia, vanhu vakanaka kwazvo, vane moyo munyoro, vane hushamwari , shamwari dzakanaka, dzakanaka pakudya cod. Kumbundira kune ese portugas.
karla selena akadaro
Pindura karla selena
kelimar gallardo akadaro
Ndinoda tsika dzechiPutukezi
Pindura kuna kelimar gallardo